स्मृतीका पानामा ‘सूर्यबहादुर थापा’ « Sherpa media Group Nepal
सन्दर्भः तेस्रो बार्षिक स्मृती दिवस
प्रकाशित मिति : ३ बैशाख २०७५, सोमबार १२:५९
आज भन्दा झण्डै ३ बर्ष अगाडी २०७२ वैशाख २ गते ८८ बर्षको उमेरमा नेपाली राजनीतिक नक्षेत्रबाट एउटा तारा अस्ताएको थियो । राजनीतिक अथक यात्रीको राजनीतिक यात्रा विश्राम भएको थियो । उनै राजनेता एवं राप्रपाका संस्थापक अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गिय सूर्यबहादुर थापाप्रति श्रद्धाशुमनका साथ केही शब्द पश्कने प्रयास गरेको छु ।
नेपाली राजनीतिमा एउटा अलगै पहिचान र अस्तित्व बनाउन सफल स्व. थापा पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । मुलुकमा उदार प्रजातान्त्रीक व्यवस्था लागू हुनुपर्छ । र, प्रजातन्त्रमा मात्र देश र जनताको समग्र विकास हुनुपर्छ भने वापत उनलाई तत्कालिन राजाले नजरबन्द र जेल पठाएका थिए । संघर्षशील र आफ्नो अडानबाट कहिल्यै विचलित नहने सूर्यबहादुर थापा प्रजातान्त्रिक समाज निर्माणका लागि जेलमा नै अनसन समेत बसेका थिए । राजनीति र प्रशासनमा एउटा कुशल व्यक्तित्व स्व. थापाको राजा र दरबारसँग सँधै दुरीको मात्रै सम्बन्ध रह्यो । नेपालमा राजसंस्थाको अपरिहार्यता प्रति उनी कटिबद्ध थिए भने राजसंस्थाको नाउमा गरिने भूमिगत गिरोहको दमन र अत्याचार विरुद्ध सदा निडर भएर बोली रहे । जसको कारण तत्कालिन दरबारले उनलाई टाढा पनि नराख्ने नजिकपनि नल्याउने नीति अबलम्बन गरिरह्यो । जवजव मुलुकमा संकट उत्पन्न हुन्थ्यो उनी मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्थे । जब संकट साम्य भएपछि उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाइन्थ्यो । तत्कालिन दरबारको यो खेलको विरुद्ध उनले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र उदारवादको पक्षमा आफूलाई उभ्याएवापत २०४० सालमा तत्कालिन युवराजधिराज दरबार हत्याकाण्डपछि राजा, हाल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको षडयन्त्रमा उनलाई प्रधानमन्त्रीबाट अविश्वासको प्रस्तावको नाटक रचेर हटाउने काम गरियो ।
तत्कालिन राजा विरेन्द्रले प्रधानमन्त्री स्वर्गीय थापालाई त्यतिवेला राजीनामा दिन भनेका थिए । तर, थापाले ‘म राजा र राजसंस्थाप्रति सदा प्रतिबद्ध छु । तर, राष्ट्रिय पञ्चायतको प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाट म प्रधानमन्त्री नियूक्त भएकाले प्रजातान्त्रिक प्रकृयाबाटै हट्न चाहान्छु । राजीनामा दिन्न ।’ भनेपछि परिस्थितीले अर्कै मोड लियो र उनको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई दबावपूर्ण ढंगले पारित गराइयो । त्यसपछिको राष्ट्रिय पंचायतमा उनले गरेको राजनीतिक भाषण निक्कै चर्चित र दरबारका लागि चुनौतिपूर्ण देखियो । उनले भनेका थिए ‘जनमत संग्रहपछि मुलुकमा एकहदको प्रजातान्त्रिक अभ्यास प्रारम्भ भई बालिक मताधिकारको आधारमा चुनिएका प्रतिनिधीहरुले मुलुक सञ्चालन गर्ने जनादेश विपरित आज जुन ढंगले सरकार परिवर्तन गर्ने काम भएको छ । देशलाई गलत दिसातर्फ अगाडी बढाउने छ । र, अहिले बनेको यो सरकार दरबारिय भूमिगत गिरोहको लाचार छायाँमात्र हो ।’ यसरी आफ्नो अडान र दृष्टिकोण सदा स्पष्ट राख्ने भएका कारण स्वर्गीय थापा आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण राजनीतिक कार्यकालमा सँधै चर्चित र संभावनाको केन्द्रमा रही रहे । उनको राजनीतिक यात्रालाई अबरोध गर्ने काम तत्कालिन युवराजधिराज र हाल पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले नै गरे गराएको भन्ने चर्चा आम सञ्चारमाध्यम र राजनीतिक क्षेत्रमा आउने गरेको थियो । घटनाक्रमले ती कुराहरुलाई पुष्टिपनि गरिसकेको अवस्था देखिन्छ ।
स्व. सूर्यबहादुर थापाले २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालको राजनीतिमा एउटा शसक्त वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ २०४७ साल जेष्ठ १५ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक राजनैतिक दल खोलेर दलिय राजनीतिको यात्रा प्रारम्भ गरेका थिए । समानन्तर रुपमा खुलेको अर्को राप्रपासँग एकिकरण गरेर २०४७ सालमा नै एकिकृत राप्रपाको अध्यक्ष भई मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसाथ गर्ने एउटा भरपर्दो र विश्वासिलो पूर्वपञ्चहरुको पार्टी राप्रपालाई अगाडी बढाउने काम स्व. थापाबाट नै भएको थियो । मुलुकको राजनीतिको विभिन्न आरोहअवरोहहरुमा स्व. थापा सदासक्रिया र प्रतिबद्ध रहँदै अगाडी बढ्ने स्वभावको कारण नेपालको राजनीतिमा उनी पूर्वपञ्चहरु मध्यै सँधै चर्चा र संभावना बोकेका उदार प्रजातान्त्रिक नेताको रुपमा स्थापित भएका थिए । २०४६ सालपछिपनि मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर दलीय सहमति र सहकार्यको पात्र बनेका स्व. थापा राजनीतिको पछिल्लो मोड माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भ भईसकेपछि २०६० सालमा पुनः प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्न पुगेका थिए । आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा माओवादीहरुसँग ‘हापुरे’मा सार्थक र प्रभावकारी वार्ता प्रारम्भ गरेर नेपालको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रस्ताव अगाडी सारेका थिए । उक्त वार्ता सफल हुन सकेन त्यो वेग्लै कुरा हो तर वार्ताका क्रममा अगाडी सारिएको सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रस्ताव आजको नेपाली राजनीतिमापनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । २०५१ सालदेखि म राप्रपाको राजनीतिमा निरन्तर सक्रिया रहँदै स्व. थापा निकट रहेर आम सञ्चारमाध्यमसँग समन्वय र सूचना संप्रेशनको जिम्मेवारीमा थिएँ । र, उहाँको प्रधानमन्त्रित्व कालमा प्रेस सल्लाहकार समेत रहेको कारणले मैले निकटबाट बुझे अनुसार स्व. थापा राजनीति र प्रशासनप्रति अत्यन्त उद्धार र आफ्नो अडान र दृष्टिकोणप्रति सदा प्रतिबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो । जस्तै संकटमा पनि नआत्तिने र जस्तै उपलब्धीमापनि पुलकित नहुने उनको सदा स्थिर स्वभावका कारण सदा सशक्त र प्रभावकारी रुपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुन स्व. थापा सफल भइरहेका थिए ।
राजनीतिमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण बोकेका स्व. थापाले माओवादी जनयुद्ध अगाडी बढ्दै जाँदा र तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६२ माघ १९ गते शाही ‘कु’ मार्फत सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएर दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने र नेताहरुलाई नजरवन्द गर्ने काम गरेपछि उनले नजरवन्दबाट वक्तव्य निकालेका थिए । ‘माघ १९ को घटनाले नेपाली राजनीतिमा ठूलो तरंग ल्याएको छ । त्यसले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रमा ठूलो क्षति पुग्ने छ । नेपालको राजनीतिले अब नयाँ मोड लिनेछ । यसको सवैभन्दा ठूलो घाटा राजसंस्थालाई पुग्नेछ ।’ यो वक्तव्य निकालेपछि केही पूर्वपञ्चहरु र दरबार निकट प्रशासकहरु स्व. थापाप्रति निक्कै आलोचक बने । तर, स्व. थापाले आफ्नो अडान र दृष्टिकोणमा कुनै परिवर्तन ल्याएनन् । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेशवादी दलहरुसँग सुमधुर र सौहद्र सम्वन्ध राख्न सफल स्व. थापा सबै दलसँग सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने प्रयास गर्दै थिए ।
अन्ततः उनको धारण र दृष्टिकोण सफल भयो । दरवार र तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले घुँडा टेक्नु पर्यो । र माओवादी र सात दलको संयूक्त दोस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो । २०६३ वैशाख ११ गते प्रतिनिधी सभा पुनः स्थापना भयो । र, नेपाली राजनीति सोही प्रतिनिधी सभाले अगाडी बढाउन प्रारम्भ गर्यो । र, अन्तत नेपालको राजनीतिबाट राजाको भूमिका सादाको लागि न्यून हुँदै गयो । २०६३ जेष्ठ ४ गते ऐतिहासिक प्रतिनिधी सभा घोषणाले नेपाली राजनीतिलाई अग्रगामी र प्रगतीशील दिसामा अगाडी बढायो । जुन घोषणालाई नेपाली राजनीतिको म्याग्नकाटा भनिएको छ ।
यसपछि नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय प्रारम्भ भयो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न भयो । २०६५ जेष्ठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणाको कार्यान्वयन गर्यो । जसबाट संवैधानिक, राजनैतिक र विधिवत तथा औपचारिक रुपमा नेपालबाट जनादेश अनुसार राजतन्त्रको अन्त्य भयो । यो नयाँ अध्यायमा पनि स्व. थापा राजनीतिक भूमिका र जिम्मेवारीमा सक्रिया नै रहे । संविधानसभाको निर्वाचनमा चुनाव लडेर उनले परिवर्तन र जनतालाई आत्मसाथ गरे । जसको कारण दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा उनी ऐतिहासिक संविधानसभाको जेष्ट सभासद्को हैसियतमा वैठकको अध्यक्षता गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।
निर्दलिय पञ्चायतदेखि बहुदलीय प्रजातन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा समेत आफू निरन्तर सक्रिय रहेर २०१५ सालको सल्लाहकार सभादेखि २०७० को संविधानसभासम्म प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित हुन सफल रहे ‘स्व. सूर्यबहादुर थापा ।’ ती राजनेता थापाको अडान, दृष्टिकोण र मूल्य मान्यतालाई उनका सन्तती र राजनीकि अनुयायीहरुले पछ्याउन सक्छन कि सक्दैनन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
आज उनै स्व. थापाको तेस्रो स्मृती दिवस २०७५ साल वैशाख २ गते हिजोमात्रै सम्पन्न भएको छ । यस अवसरमा स्व. थापाले छोडेर गएको राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजधानीमा र मुलुक भरी नै आफ्नो कार्यकर्ता माझ सभ्य र भव्य रुपमा स्वर्गीय थापाको स्मृती दिवस मनाउने नै छ । यस अवसरमा स्व. थापाका दृष्टिकोणहरु राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उद्धारवाद र प्रगती र परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने मान्यतालाई अगाडी बढाउने प्रण गर्न सकेमा स्व. थापाप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको ठहरिन्छ । स्व. थापाको निकट अनुयायी र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति एउटा सचेत पत्रकारको नाताले स्व. थापाप्रति भावपूर्ण श्रद्धाशुमन व्यक्त गर्दछु ।
– पत्रकार एवं स–प्रबक्ता, राप्रपा (प्रजातान्त्रि)